နည်းပညာ အသစ် တွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ အတွက် Toyota ထံမှ ရှယ်ယာ ၀.၃ % ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Subaru! – MyMedia Myanmar
နည်းပညာ အသစ် တွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ အတွက် Toyota ထံမှ ရှယ်ယာ ၀.၃ % ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Subaru!
Subaru နဲ့ Toyota ကတော့ အခု လက်ရှိ အချိန်ထိကို ကောင်းမွန်တဲ့ ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးတွေ နဲ့ ရပ်တည် နေကြ တဲ့ နာမည်ကြီး ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကားလောက ထဲက အတော်များများကလည်း Toyota 86 နဲ့ Subaru BRZ တို့ကို တွဲဖက်ကားတွေအဖြစ် သတ်မှတ် ထားကြတာ ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ အတော်လေး ရရှိခဲ့ ကြတဲ့ အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ ကားလောကတစ်ခုလုံးက လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နဲ့ ရှေ့ ဆက်ရပ်တည် သွားကြဖို့ကို စိုင်းပြင်ကာ ကြိုးစားနေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အခြေအနေ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကတည်းက ပူးပေါင်းကာ ဘက်ထရီ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး ကားတွေ အတွက် Platform တစ်ခုကို တည်ဆောက် ဖန်တီးသွားမယ်လို့ သဘောတူထား ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းပညာ ရပ်တွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင် ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ကာ Toyota Motor Cooperation ထံကနေရှယ်ယာတွေကိုဝယ်ယူလိုက်တယ်လို့ Subaru ဘက်ကကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပြီး တန်ကြေး အားဖြင့်တော့ 70 Billion Yen ( $ 675 Milion ) လောက်အထိကို ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က နှောင်းပိုင်းလောက် တုန်းကလည်း Subaru နဲ့ ပူးပေါင်း ဖန်တီးထားတဲ့ e-TNGA Platform အပေါ် အခြေခံ တည်ဆောက်လာမယ့် အရွယ်အစား အလယ်အလတ်ရှိ လျှပ်စစ် SUV ကားတစ်စီးကို အကြို ပြသခဲ့ဖူးတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ Toyota ဘက်ကပြသပွဲအပြီးမှာ Subaru ဘက်ကနေလည်း သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Crossover တစ်စီး ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဥရောပမှာ စတင် မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ သိထားရတာ ဖြစ်ကာ မိတ်ဆက်မယ့် ရက် အတိအကျကိုတော့ မသိရှိ ရသေးပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆိုပါ ကားဟာ Subaru ဘက်က ထုတ်လုပ်မယ့် ပထမဆုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သီးသန့်သုံး ကားတစ်စီး ဖြစ်‌လာတော့မှာပါ။ Toyota ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကဏ္ဍ တိုးတက်လာမှုရယ် Subaru ရဲ့ ကျစ်လစ်ကောင်းမွန်တဲ့ All-Wheel Drive စနစ်တို့ ပေါင်းစပ်ကာ ကမ္ဘာ့လျှပ်စစ်ကား ဈေးကွက်ထဲကို အခိုင်မာဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံး တစ်ခု အဖြစ် ဝင်ရောက်လာဖို့ အတွက် အပြင်းအထန် ပူးပေါင်း ကြိုးစားသွား ကြတော့ မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ Subaru ရဲ့ နောက်ဆုံး သိရှိထားရတဲ့ ပမာဏ အရ 8,973,700 ရှယ်ယာပမာဏ ဟာ Toyota ထဲမှာ 0.3 % နဲ့ ညီမျှတာ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် အနာဂါတ် မှာ ဆိုရင် လျှပ်စစ် စွမ်းအင် အပြင် မောင်းသူမဲ့ ကား လောက ထဲမှာပါ အဆိုပါ ကား ကုမ္ပဏီ ကြီး ၂ ခုရဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင် လာမှုကို မြင်တွေ့ ရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ အခု ရှယ်ယာ ဝယ်ယူတဲ့ ကြေညာချက် ထဲမှာ တော့ Subaru ဟာ အနာဂါတ် မှာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားအားထုတ် မှုတွေကို ဆက်လက် ပြုလုပ် နေမှာ ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု အကြားက ရေရှည် ပူး ပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း ခိုင်မာစေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အခု လိုမျိုး ရှယ်ယာတွေ ဝယ်ယူလိုက်တာကတော့ အခု မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်မယ့် Subaru ရဲ့ ငွေကြေး စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အနှစ်ချုပ် ‌အပေါ်မှာတော့ အကျိုး သက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပါဘူး။ အခုလို မျိုး လျှပ်စစ်ကားတွေ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ အကြောင်းကို အာရုံစိုက် တဲ့ အခါမှာတော့ All New Toyota 86 အကြောင်းကိုလည်း ဆက် လက် ပြောကြားရာမှာ ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက မှ ထုတ်ဖော် ခဲ့တဲ့ 2022 Subaru BRZ နဲ့ အများကြီး ဆက်စပ် နေတဲ့ ကား တစ်စီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Subaru BRZ ကတော့ 228 Hp စွမ်းဆောင်ရည် ရှိတဲ့ Boxer Engine ကို တပ်ဆင် အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီး ယခင် BRZ အဟောင်းမှာတုန်းက ပိုမို မြင့်မားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကို အသုံးပြုနိုင်ပါရက် နဲ့ ဘာကြောင့် မသုံးခဲ့တာလည်း ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သူ တစ်ချို့ကို လည်း အခု ကား အသစ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အသစ် နဲ့ အတူ ဖြေရှင်း လိုက် နိုင်ပါတယ်။ အခုလို မျိုး Toyota နဲ့ Subaru တို့ အကြားကလာမယ့် နှစ်အနည်းငယ်လောက် အတွင်း မှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ အရှိန် မြင့်လာနိုင်မှု နဲ့ အတွက် ဈေးနှုန်း သက်သာတဲ့ Sports ကားတွေ နဲ့ ပိုပြီး အ ဆင့်မြင့်တဲ့ လျှပ်စစ် ကားတွေကို ပိုပြီး မြင်တွေ့လာ ရဖို့ ရှိနေပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post နည်းပညာ အသစ် တွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ အတွက် Toyota ထံမှ ရှယ်ယာ ၀.၃ % ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Subaru! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-25T16:30:30+06:30January 25th, 2021|MYCARS MYANMAR|